Degso The Lord of the Rings: Rise to War APK loogu talagalay Android
Degso The Lord of the Rings: Rise to War
Bilaash Degso loogu talagalay Android (1843.20 MB)
Degso The Lord of the Rings: Rise to War,
Eebaha siddooyinkii: Rise to War waa ciyaarta mobilada ee rasmiga ah ee taxanaha Lord of Rings, oo ay soo saareen Ciyaaraha Netease.
Download Eebbe siddooyinkii: u kac dagaalka
Sheekooyinka xiisaha leh ee dadkii hore, ha ahaadeen jacayl, saaxiibtinimo ama sharaf, waa wax la soo dhaafay. Dagaal cusub oo giraanta ah ayaa qarka u saaran, masiirka Dhulka Dhexe hadda wuxuu ku jiraa gacantaada. Ciidan mugdi ah oo aan laga maarmi karin ayaa sii kordhaya oo soo dhex-galaya dhammaan Dhulka Dhexe. Minas Tirith ilaa Buur Doom, koox kasta waxay u ooman tahay inay gacanta ku dhigto Hal Giraanta oo ay maamusho Dhulka Dhexe weligeed. Hal faraanti oo dhammaantood lagu xukumo!
Khibrad u yeelo dagaalka Giraanta: Hal Giraanta ayaa mar kale ka soo muuqatay qalcadda cidlada ah ee Dol Guldur. Giraantu waxay u siisaa qofka xambaarsan awood aan la tartami karin si uu u xukumo Dhulka Dhexe, isagoo dadka oo dhan u kala jiidaya dagaal weyn.
Dhisida dejin la xoojiyay: Kaabayaasha dejintaada ayaa goaamisa waxtarka xeeladahaaga. Dhisme kastaa wuxuu u shaqeeyaa si gaar ah, xooggaaguna wuu kordhaa marka degitaankaagu kobco.
Isu soo ururi ciidan aad u adag: laga bilaabo waranleyda, qaansoleyda iyo mindiyo ilaa xayawaanno aad u fiican iyo dugaag cabsi leh, dhammaan xoogagga waa in loo yeeraa ka hor inta uusan dagaalku bilaaban. Haddii istaraatiijiyadaadu tahay mid adag oo awoodahaagu weynaadaan, guushu adigaa iska leh.
Dhis saaxiibtinimadaada: Adigoo ah taliye Dhulka Dhexe, waa inaad ku biirtaa adduun weyn oo aad maamushaa adoo horumarinaya degsiimadaada, ballaarinaya boqortooyadaada, iyo sameynta walaaltinimadaada. Caqabado waaweyn ayaa ku sugaya.
Ballaarinta aagagga kooxaynta: Kordhi awooddaada adoo qorta ciidamo socdaal, ballaarinta dhulalka, ururinta kheyraadka qiimaha leh iyo iska caabinta cadawga xilliga oo dhan. Khibrada iyo xoogga aad hesho inta lagu guda jiro guushu waxay kaa caawin doontaa inaad ka gudubto caqabadaha lama filaanka ah.
Baadh waxyaalaha yaabka leh ee Dhulka Dhexe: Laga soo bilaabo haybadda sare ee Minas Tirith ilaa argagaxa bahalnimada ah ee Barad-dur, la kulan dib-u-abuuridda Dhulka Dhexe oo kugu garaacaya adduun weynaha uu abuuray JRR.
The Lord of the Rings: Rise to War Noocyada
Cabirka Faylka: 1843.20 MB
Horumar: NetEase Games
Eebaha siddooyinkii: Rise to War waa ciyaarta mobilada ee rasmiga ah ee taxanaha Lord of Rings, oo...
Dagaal Stick: Dhaxalka waa ciyaar istiraatiijiyad leh oo aan kula dagaallameyno kooxo badan oo...
Isku dhaca qabiilooyinka waa ciyaar istiraatiijiyad internetka ah oo aad kala soo bixi karto oo aad...
Heroes of the Dark waa ciyaar door-istiraatiiji ah halkaas oo aad kula kulanto waxyaalaha qarsoon...
Modern Dead waa isku dhafka ciyaarta doorka-furan ee furan (rpg) iyo ciyaarta istaraatiijiyadeed ee...
Badbaadada: Day Zero waa ciyaar istiraatiijiyadeed oo u taagan qaab ciyaareedkeeda RPG ee aadka u...
Waxaa lagu siiyay xarun yar oo ku taal Hawada Sare, ciyaar ka farxin doonta kuwa jecel booska ama...